ဗေဒင်ဆရာမှ ကျောင်းသူလေးသုံးယောက်ကို တစ်လှည့်စီခေါ်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်….... - ALANZAYAR
05/02/2020 admin သတင်းဆောင်းပါးများ 0
ဒီလိုရက်စက်တဲ့ မုဒိမ်းမှုကို ဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး… ဗေဒင်ဆရာမှ ကျောင်းသူလေးသုံးယောက်ကို တစ်လှည့်စီခေါ်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်..။
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွား..။
ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိ သီဟအောင် ဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာက သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်အေးမြင့် (၃၈)နှစ်ကို ကံနိမ့်နေလို့ ယတြာချေရမယ်လို့ပြောတယ်..။
ယတြာက အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို သူ့ထံသို့ (၇)ပတ် တိုင်တိုင် ခေါ်လာပေးရမယ်လို့ဆိုပြီး သူ့ရည်းစားအပျိုကြီး ခေါ်လာပေးတဲ့ ကလေးမလေးတွေကို တည်းခိုခန်းကိုခေါ်ပြီး မုဒိန်းကျင့်တာပါ..။
သူ့ရည်းစား ဗေဒင်ဆရာရဲ့ စေခိုင်းချက်အရ ယတြာချေဖို့ ဒေါ်အေးမြင့် က ပထမဆုံး သူမရဲ့တူမ ဖြစ်သူ အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ် ကလေးမ ကို စည်းရုံးပြီး မုဒုံမြို့ မဟာနန္ဒာတည်းခိုခန်း အခန်းနံပါတ်(၃)ကို ခေါ် ဆောင်လာပေးတဲ့အတွက် တကြိမ် မုဒိန်းကျင့်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်..။ နောက်ထပ် တပတ်လောက်အကြာမှာ အဲဒီကလေးမလေးကိုပဲ သံဖြူဇရပ်မြို့က မြတ်မိခင် တည်းခိုခန်း အခန်းနံပါတ်(၃၀၄) မှာ နောက်တခါ ထပ်ကျင့်ခဲ့တယ်..။
နောက်ထပ် တပတ်မလဲ ဗေဒင်ဆရာရဲ့ ရည်းစား ဒေါ်အေးမြင့် က ပထမကျင့်ခံထိတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေ ကို စည်းရုံးပြီး အသက်(၁၃)နှစ် နဲ့ (၁၂)နှစ်အရွယ်..။
နောက်ထပ် ကလေးမ ၂ ယောက်ကို ဗေဒင်ဆရာဆီ ပို့ပေးခဲ့လို့ မြတ်မိခင် တည်းခိုခန်း အခန်းနံပါတ်(၃၀၄)မှာပဲ တကြိမ်စီ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်..။
အဲဒီလို ကလေးမလေးတွေကို စည်းရုံးပြီး အပတ်စဉ် တည်းခိုခန်းခေါ် မုဒိန်းကျင့် နေတဲ့ကိစ္စကို ကလေးတွေ အချင်းချင်းကြား အသံထွက် လာရာမှ မိဘတွေက သိခဲ့လို့ ဒီယုတ်မာတဲ့ အမှုကြီးပေါ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်..။
လေးယောက်မြောက် ပို့ဆောင်ခံရမဲ့ ကလေးမလေးကို အရှေ့မှာ မုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးမလေးတွေက အခြေအနေကို ပြောပြရာမှ ၄ ယောက်မြောက် ကလေးက ကြောက်ပြီး မိဘတွေကို ပြန်ပြောရာမှ ဒီအမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာပါ..။
လက်ရှိတော့ မုဒိန်းမှုတရားခံ ဗေဒင်ဆရာ သီဟအောင် ဆိုသူနဲ့ ကလေးမလေးတွေကို စည်းရုံးပို့ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရည်းစား ဒေါ်အေးမြင့် ဆိုသူကို ဖမ်းဆီးပြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ ၃၆၃ ၁၁၄ တို့နဲ့ အမှုဖွင့် စစ်ဆေး နေတယ်လို့ နယ်မြေခံတွေဆီက သတင်းရပါတယ်..။
စနစ်တကျ တပတ်တယောက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှု အတွက် သင်တို့ကရော ဘာပြောချင်ကြလဲ..?
နယ်မြေခံတွေကရော ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထပ်သိထားတာလေးတွေထပ်ရေးပြလို့ ရပါတယ်..။ Credit to Zin Moe
ဒီလိုရကျစကျတဲ့ မုဒိမျးမှုကို ဖတျပွီး ဘာပွောရမှနျးတောငျ မသိတော့ဘူး… ဗဒေငျဆရာမှ ကြောငျးသူလေးသုံးယောကျကို တဈလှညျ့စီချေါပွီး မုဒိမျးကငျြ့တဲ့ဖွဈရပျ..။
မှနျပွညျနယျ သံဖွူဇရပျမွို့တှငျ ဗဒေငျဆရာဆိုသူက ၇ တနျး ကြောငျးသူ(၃)ဦးကို တညျးခိုခနျးသို့ အလှညျ့ကခြျေါယူပွီး မုဒိနျး ကငျြ့မှုဖွဈပှား..။
ရောငျးဒေါငျးကြေးရှာ အရှပေို့ငျးမှာနတေဲ့ အသကျ(၂၈)နှဈအရှယျရှိ သီဟအောငျ ဆိုသူ ဗဒေငျဆရာက သူနဲ့ရညျးစားဖွဈနတေဲ့ အပြိုကွီး ဒျေါအေးမွငျ့ (၃၈)နှဈကို ကံနိမျ့နလေို့ ယတွာခရြေမယျလို့ပွောတယျ..။
ယတွာက အပတျစဉျ စနနေတေို့ငျး မိနျးကလေးငယျတဈဦးကို သူ့ထံသို့ (၇)ပတျ တိုငျတိုငျ ချေါလာပေးရမယျလို့ဆိုပွီး သူ့ရညျးစားအပြိုကွီး ချေါလာပေးတဲ့ ကလေးမလေးတှကေို တညျးခိုခနျးကိုချေါပွီး မုဒိနျးကငျြ့တာပါ..။
သူ့ရညျးစား ဗဒေငျဆရာရဲ့ စခေိုငျးခကျြအရ ယတွာခဖြေို့ ဒျေါအေးမွငျ့ က ပထမဆုံး သူမရဲ့တူမ ဖွဈသူ အသကျ(၁၂)နှဈအရှယျ ကလေးမ ကို စညျးရုံးပွီး မုဒုံမွို့ မဟာနန်ဒာတညျးခိုခနျး အခနျးနံပါတျ(၃)ကို ချေါ ဆောငျလာပေးတဲ့အတှကျ တကွိမျ မုဒိနျးကငျြ့ပွီး ပွနျလှတျလိုကျတယျ..။
နောကျထပျ တပတျလောကျအကွာမှာ အဲဒီကလေးမလေးကိုပဲ သံဖွူဇရပျမွို့က မွတျမိခငျ တညျးခိုခနျး အခနျးနံပါတျ(၃၀၄) မှာ နောကျတခါ ထပျကငျြ့ခဲ့တယျ..။
နောကျထပျ တပတျမလဲ ဗဒေငျဆရာရဲ့ ရညျးစား ဒျေါအေးမွငျ့ က ပထမကငျြ့ခံထိတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ သူငယျခငျြးလေးတှေ ကို စညျးရုံးပွီး အသကျ(၁၃)နှဈ နဲ့ (၁၂)နှဈအရှယျ..။ နောကျထပျ ကလေးမ ၂ ယောကျကို ဗဒေငျဆရာဆီ ပို့ပေးခဲ့လို့ မွတျမိခငျ တညျးခိုခနျး အခနျးနံပါတျ(၃၀၄)မှာပဲ တကွိမျစီ မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့ပါတယျ..။
အဲဒီလို ကလေးမလေးတှကေို စညျးရုံးပွီး အပတျစဉျ တညျးခိုခနျးချေါ မုဒိနျးကငျြ့ နတေဲ့ကိစ်စကို ကလေးတှေ အခငျြးခငျြးကွား အသံထှကျ လာရာမှ မိဘတှကေ သိခဲ့လို့ ဒီယုတျမာတဲ့ အမှုကွီးပျေါခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ..။ လေးယောကျမွောကျ ပို့ဆောငျခံရမဲ့ ကလေးမလေးကို အရှမှေ့ာ မုဒိနျးကငျြ့ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးမလေးတှကေ အခွအေနကေို ပွောပွရာမှ ၄ ယောကျမွောကျ ကလေးက ကွောကျပွီး မိဘတှကေို ပွနျပွောရာမှ ဒီအမှုပျေါပေါကျခဲ့ရတာပါ..။
လကျရှိတော့ မုဒိနျးမှုတရားခံ ဗဒေငျဆရာ သီဟအောငျ ဆိုသူနဲ့ ကလေးမလေးတှကေို စညျးရုံးပို့ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရညျးစား ဒျေါအေးမွငျ့ ဆိုသူကို ဖမျးဆီးပွီး ပုဒျမ ၃၇၃၆၃၁၁၄ တို့နဲ့ အမှုဖှငျ့ စဈဆေး နတေယျလို့ နယျမွခေံတှဆေီက သတငျးရပါတယျ..။ စနဈတကြ တပတျတယောကျ မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တဲ့ သကျငယျမုဒိနျးမှု အတှကျ သငျတို့ကရော ဘာပွောခငျြကွလဲ..? နယျမွခေံတှကေရော ဒီအမှုနဲ့ ပတျသတျပွီး ထပျသိထားတာလေးတှထေပျရေးပွလို့ ရပါတယျ..။